टोटल धमालको आजसम्मको टोटल कमाइ कति
बलिउडमा गएको हप्ता कमेडी फिल्म ‘टोटल धमाल’ रिलिज भएको थियो ।
नाट्य महोत्सवमा आज चार नाटक मञ्चन हुँदै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव पनि आजबाट
काठमाडौँ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव अन्तर्गत आज ४ वटा नाटकहरु मञ्चन हुँदैछन् । आज पनि काठमाडौँका कीतिपुर नाटकघर, कौशी थियटर, शिल्पी थियटर तथा मण्डला थियटरमा नाटक हुन लागेका हुन् ।
जेठ १० गते रिलिज हुने चलचित्र साइनोको पहिलो गीत सार्वजनिक
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्रकी प्रथम नायिका भुवन थापा चन्दले निर्माण गरेको चलचित्र साइनोको पहिलो गीत रिलिज गरिएको छ । प्रताप दास र मेलिना राईको आवाज रहेको गीतमा शब्द चेतन कार्की र संगीत बसन्त सापकोटाको छ ।
स्वस्तिमाको मौन संकेत...
फिल्म रिलिजको समयमा कलाकार र निर्माता/निर्देशकको सम्बन्ध भुसको आगो जस्तै हुन्छ । बाहिरबाट हेर्दा केही नदेखिने तर भित्रभित्रै सल्किरहने ।
साइडमा पनि दंग नीता !
बोली फेर्न माहिर मानिन्छन् कलाकार । यसमा नीता ढुङ्गाना पनि कम छैनन् । बल गरेर अभिनय अगाडि बढाउँदै गरेकी उनले हालै एक पत्रकार सम्मेलनमा ठूलो कुरा गरिन् । फिल्म ‘साइनो’को प्रेस–मिटमा उनले ‘मुख्य वा सहायक कुन भुमिका छ ? नहेर्ने, भुमिकाको गहिराई देर्ने दर्शन छाँटिन् ।
माझी फिल्म ‘मोङो डोङा–२’ पहिलो गीत रिलिज
काठमाडौं । माझी फिल्म ‘मोङो डोङा–२’ पहिलो गीत रिलिज गरिएको छ । फिल्मको निर्माण पक्षले ‘घाटपूजा मेला’ गीतको भिडियो सामाजिक सञ्जाल युट्युव मार्फत रिलिज गरेका हुन् । सरला माझीको शब्द तथा लक्षु प्रकाश मल्लको एरेञ्जमा गीतलाई यमन माझी र पूजा तामाङले स्वरबद्ध गरेका हुन् ।
घरेलु कामदारलाई राजेश हमालद्वारा २ करोड मूल्य बराबरको जग्गा प्रदान
काठमाडाैँ । चलचित्र अभिनेता राजेश हमालले २ करोड मूल्य बराबरको जग्गा दान गरेको छ । हमालले घरमा सेवा गर्न बसेका ४ विपन्न परिवारलाई २ करोड मूल्य बराबरको जग्गा प्रदान गरेका हुन् ।
सञ्जय लीला भंसालीको फिल्ममा सँगै देखिदैछन् सलमान र प्रियंका ?
एजेन्सी । अभिनेत्री प्रियंका चोपडा फिल्म ‘भारत’बाट बलिउडमा कमब्याक गर्दै थिइन्, तर उनले यो सुटिङ सुरु हुनु अगाडि नै फिल्मलाई छोडिदिइन् । त्यसपछि सलमान खान र प्रियंका चोपडाको सम्बन्ध चिसिएको समाचार बाहिरिएको थियो । अहिले प्रियंकाले सलमान खानसँग सोसल मिडियामा कुराकानी गर्नका लागि पहल गरेकी छन् ।